နားခိုရာ: Congratulation Roger!
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားလို့ French Open Final ကို live ကြည့်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီညနေက ကိုဇော်မိုးတို့ ၀င်းထိန်တို့နဲ့ မန္တလေး seminar ကိစ္စဆွေးနွေးကြဖို့ စိန်လျှံမှာ ချိန်းဖြစ်တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီဖိုင်နယ်ပွဲ ပြလို့ ပြီးတဲအထိ စောင့်ကြည့်လိုက်တာ အိမ်ပြန်တောင် နောက်ကျသွားတယ်။
လက်ရှိချန်ပီယံNaral ကို စတုတ္ထအဆင့်မှာ အနိုင်ရိုက်ပြီး ဖိုင်နယ်တက်လာတဲ့ Soderling နဲ့ Federer တို့ရဲ့ Final ပွဲပေါ့။ Roger က သုံးပွဲပြတ်ရိုက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ပြင်သစ်အိုးပင်း ချန်ပီယံဆုကို ရရှိသွားတယ်။ အခုဆို Grand Slanm ပြိုင်ပွဲ အားလုံးကို နိုင်ဖူးသွားပြီပေါ့။ ပြီးတော့ Pete Samprasတင်ထားခဲ့တဲ့ Grand Slam ၁၄ကြိမ်ရတယ်ဆိုတဲ့ စံချိန်ကိုလဲ လိုက်မှီသွားပြီ။
ကိုယ်အားပေးတဲ့ Nardal ရှုံးသွားပေမဲ့ အခုပွဲမှာ Roger နိုင်သွားခဲ့တာ အဟုတ်တကယ်ကို ၀မ်းသာတာပါ။ နောက်ဆုံး US Open Final မှာ Nadal ကိုရှုံးပြီး ဆုပေးစင်မြင့်ပေါ်မှာ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ၀မ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူ့ခံစားချက်ကို အခုထိ မြင်ယောင်မိနေတုန်းပဲ။ အဲဒီတုန်းက စိတ်ပျက်ပြီး တင်းနစ်လောကကို ကျော်ခိုင်းသွားမှာတောင် စိုးရိမ်မိတာ။ တော်သေးတာပေါ့။
Posted by little moon at 7:11 PM
There is some typing error.I think you may want to say Soderling and Federer. :-)
အဲဒီအားကစားသမားတွေ အောင်ပွဲရသည်ဖြစ်စေ. ရှုံးနိုမ့်သည်ဖြစ်စေ.သူတို့ရဲ့မျက်နျာကို ကြည့်ရတာ အန်မတန်မှ အသက့်ပါလို့ အမြဲဘဲ သဘောကျတယ။်